लक्डाउनमा काठमाडौँमा घट्यो डरलाग्दो घटना, प्रेमिकाको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे प्रेमी, बहिनीले यसरि मारेको खुलाशा गरिन, आमा बेहोस – Complete Nepali News Portal
लक्डाउनमा काठमाडौँमा घट्यो डरलाग्दो घटना, प्रेमिकाको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे प्रेमी, बहिनीले यसरि मारेको खुलाशा गरिन, आमा बेहोस
ScotNepal May 13, 2021
काठमाडौ । निषेधाज्ञाको क्रममा एक युवक प्रेमिकाको कोठामा मृ त फेला परेपछि युवकको परिवारले घटना रहस्यमय भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । मेरो भाई विरामी भएको छ छोरालाई पठाइदिनु भनेर बोलाएपछि छोरा गएको आमाको भनाई छ । दुई दिन साँझ घरवाट निस्किएको छोरा भोलीपल्ट मृत्यु भएको खबर सुन्दा आमालाई कस्तो भयो होला ? आमाले नजाउ छोरा भन्दा भन्दै तपाईको छोराको जिम्मा म लिन्छु भन्दै बोलाएको पनि आमाको भनाई छ ।
आफ्नो छोरालाई युवतीले बारम्बार फोन गर्ने गरेको पनि आमाको भनाई छ । आमाले छोराको फोन उठाउँदा आमालाई समेत ध म्की दिएको बताएकी छन् । युवतीका कारणले नै छोराको मृत्यु भएको भन्दै आमाले घटना निश्पक्ष छानविनको माग गरेकी छन् ।
अफिसवाट छोरा आएर राती खाना बस्दा समेत युवतीले फोन गरेर तुरुन्तै तपाईको छोरालाई पठाइदिनु भनेर भन्ने गरेको आमाको भनाई छ । छोराले नै म कोठामा आएको छैन भनिदिनु आमा भनेर फोनमा कुरा गर्न दिएपछि आफुले त्यसै भन्दा तेरो छोरा कोठामा आएको छ मलाई किन झु टो बोलेको भन्दै युवतीले आफुलाई थ र्का एको बताइन् । हेर्नुहोस के भने त उनका बुवा र बहिनीले –
सेतिको खोच थुनिने ख-तरा ! चिरा परेको जमिन खस्ने अबस्थामा,...
गैँडाकोटमा बिहेकै दिन गरगहना लिएर बेहुली फरार (भिडियो सहित)
सबिताको श्रीमानको पहिलो श्रीमतिले यसरी ज्यान बचाएर फुत्केकी रहेछिन, १...